Kedu ka ngwá ọrụ backlink counter si arụ ọrụ?
Mgbe ị na-emepụta mkpọsa ụlọ njikọ, ị ga-achọ ịma uru njikọ ị na-arụ. Ọ bụrụ na ịmara oke azụlink bara uru, ị nwere ike nyochaa ma ego gị bara, oge na mgbalị ma ọ bụ. Ị nwere ike ma nyochaa njikọ ejiri aka gị abanye ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ backlink counter. Akụkụ a na-etinye aka na nsonaazụ njikọ mmekọrịta dị iche iche ma nwee olileanya na ọ ga-enyere gị aka iwusi mgbasa ụlọ ọrụ gị - foros de camaras reflex digitales. Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na usoro nyocha ndị a.
ụzọ ụzọ azụ azụ
Njikọ ndị jikọtara ha
Ọ bụ nke mbụ ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-eke njikọ gị na saịtị. Ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọta na saịtị na-ekpebi ikike na ikike ya. Ụlọ ọrụ PR ndị dị elu na-ejikọta na ngalaba, ọ ka mma ọ ga-ebuli na Google. Iji meziwanye vidiyo gị na saịtị nchọta ihuenyo Google, ị kwesịrị ịchọ ịbanye njikọ naanị site na ụdị ụdị weebụ.
Ọtụtụ ngwá ọrụ ndị ọzọ na-enyere aka ịlele ogo nke njikọ. Ikekwe ị nụ banyere ụfọdụ n'ime ha. Ekwadoro m iji ngwa ngwa ndị dị otú ahụ dịka Semalt Web Analyzer ma ọ bụ Ahrefs. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịnye gị data kachasị mma na isi ụlọ ọrụ njikọ gị. Ya mere, ma ị na-atụle nke a site na iji DA, DR, TF, CF ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ ịchọta ụzọ ntuziaka nke a ka bụ otu nọmba na-achọpụta ike nke njikọ (ọ bụghị mkpa).
Rụọ okporo ụzọ nke njikọ njikọ
Nzube bụ isi maka iwuli njikọ dị iche iche bụ iji nweta okporo ụzọ ezubere iche site na ha. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-ejikọta okporo ụzọ nke njikọ inbound bụ MUST. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nwere ọtụtụ okporo ụzọ na-abata, ọ ga-abụ na ọ bụ saịtị a ma ama nke na-enye ndị ọrụ nnukwu ọdịnaya. Ọ pụtara na engines ọchụchọ nwere ike na-ebuli ya oke kwa, na-eweta ọtụtụ na pịa-site ọnụego, okporo ụzọ na ekewa converted.
N'ikwu okwu n'ozuzu, web saịtị ndị na-emepụta ọtụtụ okporo ụzọ ka a na-ewere ikike karịa n'ihi ihe ndị a:
Okporo ụzọ dịka ọkwa
Ụgbọ okporo ụzọ bara uru ịkwado na Google dị ka nchọpụta a na-enyocha ikike ikikere weebụ na mkpa site ọnụ ọgụgụ nke ndị bịara abịa gaa na ebe nrụọrụ weebụ site na nchọta ọchụchọ. Ọ pụtara na saịtị ị na-enweta njikọ sitere na ya nwere ike ịbawanye na mma ma si otú a na-emepụta njikọ ndị ọzọ, na-eme ka njikọ inbound gị ike karịa oge.
Okporo ụzọ na-abanye na saịtị gị
Ebe ndị nwere ọtụtụ okporo ụzọ ga-enyekwa okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị site na backlinks. Ọ ga-emetụta mgbanwe gị ma bulie ikike gị na Google. Ọ bụ ezie na ole ka dị ike ka na arụmụka. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị hụ na ị ga-aga na saịtị ndị nwere ike iwetara okporo ụzọ gị.
Oge ọ bụla ị na-arụ njikọ, ị ga-achọ ijide n'aka na ị na-etinye ha na ụdị niche dị iche iche na ntinye anya gị saịtị. Ọzọkwa, a ghaghị itinye njikọ dị iche iche n'ime ihe dị mkpa iji nye ndị ọrụ nghọta zuru oke banyere ihe ha ga-eche ihu na-esote njikọ njikọ gị.